Abdi Mudeey “Tabar ayaan u weynay in aan la xisaabtanno hay’addaha aan dowliga aheyn” – Kalfadhi
Abdi Mudeey “Tabar ayaan u weynay in aan la xisaabtanno hay’addaha aan dowliga aheyn”
Guddoomiye ku-xigeenka kowaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh Ibraahim Muudeey, ayaa dhaliin xooggan usoo jeediyay dad Soomaali ah oo uu sheegay in ay hor-taaganyihiin la xisaabtanka hay’addaha aan dowliga aheyn ee dalka Soomaaliya ka shaqeeya.
Golaha Shacabka ayaa shalay dood adag ka yeeshay xeerka hay’addaha aan dowliga aheyn, kaas oo Wasaaradda Qorsheyta ay usoo gudbisay.
“Markii aan ahaa Wasiirka Shaqadda waxaan sameeyay work permit, si aan u daba-galno hay’addahaasi. Shaqaddii dadka Soomaaliyeed ay qaadan la haayeen ayey iyaga qaadanayaan, si aan u oggaanno oo aan u daba-galno, dad Soomaaiyeed ayaan ka oggaan weynay”.
Hay’addaha 132-da ah ee wasiirka uu sheegayo qof kasta oo Soomaali ah ayaa daba-taaggan, xildhibaannada qaarkood ayaa kamid ah. Hay’ad kasta qof ayaa shirko la ah, sidaasi awgeed sidee loola xisaabtamayaa? Sidee xuquuqdii loosoo celinayaa? Annagaa tabar u weynay, arrintaasi waa xaqiiq, waa wax aan soo taabtay oo aan oggahay, ayuu hadalkiisu sii raaciyay.
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh Ibraahim Muudeey, ayaa wasiirka usoo jeediyay si loola xisaabtamo hay’addahaasi in la daba-gallo qof kasta oo ku lamaanay, sida uu hadalka u dhigay.
“Hay’ad kasta marka aad taabato qof ayaa kasoo horreeya oo kula dagaallamaya. Soomaalidda ayaa shaqadda laga qaban karin, maxaa lagu eedeynayaa hay’adda aan Soomaalidda aheyn.
Wasiira Qorsheynta Xukuumadda Jamal Maxamed Xasan, ayaa Baarlamaanka u akhriyay xeerka, waxaanna uu caddeeyay in xeerkan uu hiigsanayo in uu abuuro jawi wanaagsan oo waxtar u leh dalka, uuna fududeeyo jawi ay ku shaqeyn karaan dhammaan hay’addaha aan dowliga aheyn ee ka shaqeeya dalka.
Sharcigan waxaa uu sahlayaa adkeynta xiriirka ay kuwada shaqeyn karaan, dowladda federaalka iyo hay’addaha caalamiga ah ee aan dowliga aheyn ee dalka yimaada, ayuu yiri wasiirka.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal ayaa aaminsan in sharcigan uu xoojinayo awoodda Xukuumadda iyo tan wasaaradda Qoraheynta.
Xukuumadda Federal ayaa horay usoo ansixisay sharciga xeerka hay’addaha aan dowliga aheyn.
Wasiirka Qorsheynta oo Golaha Shacabka u gudbiyay Xeerka hay’addaha aan dowliga aheyn